विश्वकपपछि सन्यास लिएका चार क्रिकेटर
२o७६ भदौ ३१ मंगलबार / Tuesday, September 17, 2019
२o७६ असार २३ सोमबार
काठमाडौँ । विश्वकप क्रिकेट अब अन्तिम चरणमा रहेको छ । सेमिफाइनलमा पुगेका चार टिमले मंलगबार र विहिबार सेमिफाइनलका आ-आफ्ना खेल खेल्दै छन् । लिग चरणका खेलबाट ६ टिम बाहिरिएका छन् । उत्कृष्ट प्रदर्शनको अपेक्षा गरिएका दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान र वेस्टइन्डिजजस्ता देशहरु सेमिफाइनलमा पुग्न सकेनन् ।
यसैवीच यस विश्वकप पछि अब विश्व क्रिकेटमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै आएका केहि क्रिकेटरले क्रिकेटबाट नै सन्यास लिएका छन् भने केहि अब अर्को विश्वकप नखेल्ने भएका छन् । यस रिपोर्टमा चार खेलाडी जो अब अर्को विश्वकपमा देखिने छैनन् उनीहरु बारे चर्चा गर्दै छौ ।
शोएब मलिक, पाकिस्तान :
पाकिस्तानका क्रिकेट शोएब मलिकले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् । पाकिस्तानले बंगलादेशविरुद्ध खेलेको विश्वकप खेलपछि शोएबले अन्तर्राष्ट्रिय एकदिवसीय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका हुन् । उनले अब आफुले टी-२० क्रिकेट लिगहरुमा ध्यान दिने बताएका छन् । मलिकको यो विश्वकप त्यति राम्रो भने भएन । उनले केबल ३ खेल खेले जसमा ८ रन मात्र बनाउन सके । उनले आफ्नो अन्तिम खेल भारतविरुद्ध खेले, जसमा शुन्यमा आउट भएका थिए ।
मलिकले पाकिस्तानबाट २८७ एकदिवसीय खेल खेलेका छन् । जसमा उनले ९ शतक र ४४ अर्धशतकसहित ७५३४ रन बनाएका छन् । त्यस्तै पाकिस्तानका लागि ३५ टेस्ट क्रिकेट खेलेका मालिकले ३ शतक र ८ अर्धशतकसहित १८९८ रन बनाएका छन् । त्यसैगरी टी-२० क्रिकेटमा १११ खेल खेल्दै ७ अर्धशतकसहित २२६३ रन बनाएका छन् ।
इमरान ताहिर, दक्षिण अफ्रीका :
यस विश्वकपमा साबि भन्दा बढी ४० बर्षिय इमरान ताहिरले पनि विश्वकपको अन्तिम खेल अस्ट्रेलियासँग खेलेसँगै सन्यास लिएका छन् ।
पाकिस्तानमा जन्मिएका ताहिरले २०११ फेब्रुअरी २४ देखि दक्षिण अफ्रीकाबाट खेल्न शुरु गरेका थिए । आफ्नो ८ बर्षे दक्षिण अफ्रीकाको क्यारियरमा ताहिरले १०७ एकदिवसीय खेल खेल्दै १७३ विकेट लिएका छन् । साथै दक्षिण अफ्रीकाका लागि २० टेस्ट खेलेका ताहिरले ५७ विकेट लिएका छन् भने टी-२० क्रिकेट ३८ वटा खेलेका छन् । जसमा उनले ६३ विकेट लिएका छन् ।
लासिथ मालिंगा, श्रीलंका :
श्रीलंकाका चर्चित तिब्र गतिका बलर लासिथ मालिंगाले आफु अब विश्वकप नखेल्ने बताएका छन् । ३५ बर्षिय मालिंगाले क्रिकेटबाट सन्यास भने लिएका छैनन् । तर उनलाई अब विश्वकप खेल्ने श्रीलंकाको टिममा देखिने छैन ।
मलिंगाको नाममा विश्वकपमा दुई ह्याट्रिक लिने रेकर्ड रहेको छ । उनको नाममा ४ बलमा ४ विकेट लिने रेकर्ड समेत रहेको छ ।
एकदिवसीय क्रिकेटमा मालिंगा विश्व क्रिकेटमै एक सफल बलर मानिन्छन । उनले २२५ एकदिवसीय खेलमा ३३५ विकेट लिएका छन् । त्यस्तै टेस्ट क्रिकेटमा भने उनले ३० टेस्ट खेल्दै १०१ विकेट लिएका छन् ।
जेपी डुमिनी, दक्षिण अफ्रीका :
दक्षिण अफ्रीकाका अलराउन्डर जेपी डुमिनीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटलाई अलबिदा गरेका छन् । अस्ट्रेलियाविरुद्धको विश्वकपको अन्तिम खेल खेलेपछि डुमिनीले आफ्नो क्रिकेट क्यारियरलाई पूर्णविराम दिएका हुन् ।
३५ बर्षिय डुमिनीले दक्षिण अफ्रीकाका लागि १९९ एकदिवसीय खेल खेलेका छन्, जसमा ४ शतक र २७ अर्धशतकसहित ५११७ रन बनाएका छन् । त्यस्तै ४६ टेस्ट खेल्दै २१०३ रन बनाएका छन् जसमा ६ शतक र ८ अर्धशतक समेत बनाएका छन् । त्यस्तै ८१ टी-२० खेल खेल्दै ११ अर्धशतकसहित १९३४ रन बनाएका छन् ।
उनले टेस्ट क्रिकेटमा ४२ विकेट लिएका छन् भने एकदिवसीय क्रिकेटमा ६९ र टी-२० क्रिकेटमा २१ विकेट लिएका छन् ।
विश्वकप फाइनलमा गल्ति भयो, तर मलाई पछुतो छैन - अम्पायर धर्मसेना
काठमाडौँ । विश्वकप क्रिकेटको फाइनलका श्रीलंकाली अम्पायर कुमार धर्मसेनाले फाइनल खेलमा आफुले गरेको निर्णयबाट कुनै पछुतो नभएको बताएका छन् । श्रीलंकाको सन्डे टाइम्स सँग कुरा गर्दै धर्मसेनाले आफुले फाइनलको अन्तिम ओभरमा
क्रिकेट विश्वकपको सारांश : कुन रेकर्ड कसले बनाए ?
काठमाडौँ । ४६ दिनसम्म चलेको विश्वकप क्रिकेट इङल्याण्डलाई विजेता बनाउदै सकिएको छ । फाइनल खेल निकै विवादमा आएको भएपनि इङल्याण्ड विजेता बनेको छ भने अब क्रिकेटको यो महाकुम्भ अर्को चार बर्षको
जासन रोयको टेस्ट टिममा डेभ्यु, विश्वकपको प्रदर्शनको मिल्यो पुरस्कार !
काठमाडौँ । इङल्याण्डलाई ४४ बर्षको विश्वकपको इतिहासमा पहिलो विश्वकप जिताउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका ओपनर जासन रोयले टेस्ट टिममा डेभ्यु गर्ने भएका छन् । आयरल्याण्डविरुद्ध इङल्याण्डको एक टेस्ट खेलका लागि रोयलाई डेभ्यु
पाकिस्तानका प्रमुख छनौटकर्ता इन्जमाम उल हकद्वारा राजीनामा
काठमाडौं । पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डका प्रमुख छनौटकर्ता इन्जमाम उल हकले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएका छन् । इन्जमामले बुधबार पाकिस्तान क्रिकेटको प्रमुख छनौटकर्ताबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् । उनको कार्यकाल यहि जुलाई
इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्न आएका विदेशी पाहुना स्वदेश फिर्ता
सीटीईभीटीमा ११ बुँदे माग राख्दै कर्मचारी आन्दोलनमा
एमबिबिएससहित चिकित्सा शिक्षाको प्रवेश परीक्षाको नयाँ मिति तोकियो
ऐन लागूपछि भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या रहदैन : मन्त्री अर्याल
अमेरिकासँग निर्णायक वार्ताका लागि उत्तर कोरिया सकारात्मक
साउदी तेल उत्पादन कटौतीसँगै तेलको मूल्य १५ प्रतिशत वृद्धि
चट्याङ लागेर बारामा एकको मृत्यु, एक घाईते
पोर्चुगलका चोकचोकमा ‘रेशम फिरिरी...’
विमानभित्र डेंगुको औषधि छर्ने व्यवस्था मिलाउन पर्यटनमन्त्रीको निर्देशन
मेसी फिट, च्याम्पियन्स लिगमा डोर्टमण्डविरुद्ध खेल्ने
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा बन्यो नयाँ किर्तिमान : सात बलमा सात छक्का
सेन्ट किट्समाथि बार्बाडोसको रोमान्चक जित, सन्दीप बने म्यान अफ द म्याच
भारतले जित्यो अन्डर १९ एशिया कपको उपाधि
सर्वोच्चको फैसलापछि रेडक्रसको साधारण सभा लगायतका अवरोध हट्ने
सिपिएलमा ट्रीनबागोको रेकर्ड, बनायो अहिलेसम्मकै धेरै रन
दक्षिण अफ्रीकाविरुद्ध खेल्ने भारतीय टेस्ट टिमको घोषणा, शुबमन गीलको डेभ्यु
सिपिएलमा बार्बाडोस पराजित, सन्दीपको औसत प्रदर्शन
अन्डर १९ एशिया कपको फाइनलमा भारत र बंगलादेश
अझै ठिक भएनन् मेसी, बार्सिलोनाको चिन्ता बढ्यो
पाकिस्तानको कप्तानमा शरफराजको निरन्तरता, आजम बने उपकप्तान